मजाक - Everest Dainik - News from Nepal
किन बस्छ सलिम सिनेमाका पोस्टर टाँसिएका भित्तामुनि रु के त्यो सदरलाइनबाट एकलैनी बजार पस्ने गल्लीतिर मोदिंदा मोदिंदैको दाहिने भित्ता होइन रु के ऊ त्यही भित्तामुनि वर्षौंदेखि जुत्ता पालिस गरेर बसिरहेछ ?
स्मृतिमा विभिन्न किसिमका बास्नाहरुको अजीब मिश्रण हुन्छ । त्यसैले ती बास्नालाई अनुभूत त गर्न सकिन्छ तर ठ्याक्कै यस्तो हो भनेर अभिव्यक्त गर्न सकिन्न । सकिन्छ, कवितामा सकिन्छ । तर, यतिबेला म कविता कहाँ लेखिरहेको छु र रु यतिखेर म विम्ब र प्रतीकहरुमा कहा“ खेलिरहेको छु र रु सलिमको कुरा गर्दा मसित काव्यमय भाषाको सङ्कट हुन्छ । जब म सलिमको कुरा भन्छु, जीवनका कलाविहीन खस्रा र धमिला सम्झनाहरुको सपाट शब्दचित्रमात्र भन्न सक्छु । सलिमसितको मेरो सम्झना कलाभन्दा धेरै पर तर जीवनभन्दा साह्रै निकटको कुरो हो ।
गल्ती गरेछु मैले । सदरलाइन गएर एकपल्ट भए पनि रस्तोगी फोटो स्टुडियोमा मैले सलिमसित उभिएर एउटा फोटो खिच्नुपथ्र्यो । त्यो फोटो भइदिएको भए आज म भन्न सक्थें, उसको हुलिया कस्तो थियो ! कसरी जोडिएका थिए उसका आँखीभौं एकआपसमा । आँखीभौं जोडिएकाहरु रिसाहा हुन्छन् रे १ सुनेको थिएँ मैले । तर, सलिम किन कहिल्यै पनि रिसाएन मसित रु त्यसबेला पनि किन रिसाएन ऊ, जब उसले र मैले सुर्खेत रोडको गड्ढामा सँगै कटिया थापेका थियौं । दुई–तीन घन्टामै सलिमले आठ–दसवटा टेंगना र गिरही माछा मारिसकेको थियो । मैले भने पटक–पटक कटियामा गड्यौंलामात्र उनिरहेको थिएँ । एउटा पनि माछा मार्न सकेको थिइन । अन्तिममा परेको एउटा माछा पनि कटियाबाट निकाल्ने क्रममा फुत्किएर फेरि गडाहामै खसेको थियो । त्यतिबेला मेरो ताल देखेर मज्जाले हाँसेको थियो सलिम र मैले आवेशमा सलिमको कटिया भाँचिदिएको थिएँ । हो, त्यतिबेला पनि रिसाएन मसित सलिम ।
मेरो स्मृतिमा त्यसैले सधैं सलिमको हँसिलो अनुहार आइरहन्छ । हँसिलो र सुकिलो । हो, उसका लुगा भने कहिल्यै पनि सुकिला भएनन् । उसले एउटाबाहेक अर्को कमिज फेरेको सम्झना छैन मलाई । कमिजको कलरमा जमेको कालो र चिल्लो मयलले पनि उसको सुकिलो व्यक्तित्वलाई मैल्याएको थिएन । मान्छे लुगाले मात्र सफा कहाँ देखिँदो रहेछ र रु लुगाले मात्र मान्छेको नग्नता छोपिने भए सधैं ठाउँठाउँमा प्वाल परेको र घरिघरि गुप्ताङ्ग देखिइरहने कट्टु लगाउने सलिम मेरो स्मृतिमा किन नाङ्गो भएर आउँदैन रु किन अश्लील देखिन्न सलिम रु गरिबीले उसलाई कागतीलाई झैं निचोरे पनि उसको स्मृतिले किन मलाई कहिल्यै पनि अम्लीय अनुभूति गराउदैन ?
यो पुस–माघ कसरी काट्यो होला सलिमले रु उसलाई जाडो भयो कि भएन रु मलाई दिक्क लाग्छ । म किन उसलाई न्यानो सुइटर दिन सक्दिन रु किन म उसलाई सधैं कठ्याँग्रिरहेकै स्थितिमा छाडिदिन्छु रु सलिम मेरो अस्तित्वको त्यो हिस्सा हो, जसलाई ढुसी परेर कुहिन दिनुहुन्न भन्ने के थाहा छैन मलाई ?
सलिम नै त हो, मलाई नेपालगन्जका गल्लीगल्ली घुमाउने । करमोहना र परसपुर लैजाने उही त हो मलाई । जोगागाउँको मेला मैले ऊसितै हेरेको होइन र रु मैले आफ्नो उमेरसँगै हुर्कंदै गरेको नेपालगन्जलाई सलिमकै आँखाबाट हेरेको त हुँ नि १ ल भैगो, सलिम मेरो आँखा होइन रे ! तर, मैले मेरो आँखामा लगाएको दूरबिन त सलिम नै हो । त्यही दूरबिनको सहायताले त मैले देख्न सकेको हुँ नेपालगन्जका दुःखी–गरिबहरुको अनौठो समाज । कति स्वार्थी छु म, जसको कारणले मैले त्यो समाजको कथा लेख्न सकें, त्यो सलिमको नाम मैले आजसम्म सहलेखकका रुपमा पनि उल्लेख गर्न सकिन । कति पाखण्डी छु म !
साथी नै त थिएँ , म उसको । त्यसैले ‘राजु’ भनेर बोलाउथ्यो सानोमा ऊ मलाई । तर, धेरै वर्षको अन्तरालमा म उसका लागि ‘राजु बाबु’ पो भइसकेको रहेछु । मैले त्यतिखेर बुझिन, त्यो मेरो हैसियत बढेको सूचना थियो या मित्रताको आदिम किताबमा धमिरा लागेको सङ्केत थियो रु के सलिमसितको मेरो सम्बन्ध बिस्तारै बिस्तारै मक्किदै गइरहेको हो ?
त्यसपछि फेरि केही वर्षको अन्तरालमा नेपालगन्ज जाँदा मैले सलिमलाई देखिन । सलिमहरुको बस्ती पनि देखिन । मानौं एउटा बालकले पेन्सिलले बनाएको चित्र थियो उसको त्यो बस्ती, जसलाई उसको कुनै साथीले इरेजरले मेटिदिएको थियो । जसरी हराएको थियो प्रेमललवाको घर र टाँगा उलारमा, त्यसरी नै सर्लक्क हराएको थियो यस पटक सलिमको बस्ती । म किन रुन सकिन त्यतिबेला रु के समयले परिपक्व बनाएको थियो मलाई रु या मेरा आँखाभित्र सुकिसकेका थिए नुनिला र ताता आँसुहरु रु आफ्नो आँखाको पानी सुकाएर के आफ्ना रचनामार्फत म मेरा पाठकलाई रुवाउने नौटङ्की गरिरहेको छु रु यदि यो विडम्बना हो भने म, यो पङ्क्तिको लेखक हजारहजार विडम्बनाको चलायमान दस्तावेज हुँ । नपढ्नूस् मलाई । इग्नोर मि !
म आज पनि अलमलिन्छु, सलिम मेरो साथी हो या मसम्म कथाका पाण्डुलिपि बोकेर आउने हुलाकी रु म अलमलमै छु, यो सलिमको पहिचानको सङ्कट हो या म आफैं गुमाउदै छु आफ्नो पहिचान रु कि, म क्रमशः ‘राजु’बाट बन्दै गइरहेको छु ‘राजु बाबु’ ?
(लेखक पाण्डेको संस्मरण ‘यार’ बाट साभार।)